जो चाहनुहुन्छ छैन, मलाई भन सही एब्स। तर, धेरै मानिसहरू यो ठूलो काम छ भन्ने महसुस। केही एक कारण को लागि हुन्छ। समस्या प्रेस लागि अभ्यास को सही सेट फेला पार्न, तथ्यलाई मा निहित। सबै अवस्थित अभ्यास को थोक, सुन्दर पेट सिर्जना उद्देश्य, "कम क्यालोरी।" तथाकथित यो कस्तो अर्थ राख्छ? त्यसैले, उदाहरणका लागि, शरीरको बोसो को बस एक किलोग्राम संग छोड्न, तपाईं कम्तिमा तीन हजार पाँच सय गर्न आवश्यक र हुनेछ पनि मुर्कुट्टा लिफ्टहरु को supine स्थितिको।
र कुनै कुरा तपाईं कसरी प्रयास गर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण थाहा र पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या एक ठूलो संख्या, इच्छित परिणाम दिन छैन, पेट क्षेत्रमा बोसो कारण हुनेछ कि सम्झना छ inviolable आरक्षित शरीर लागि अत्यावश्यक ऊर्जा, र तिनीहरूले धेरै अन्तिम क्षण बिताए।
तर, बस परित्याग र लक्षित त्याग्न छैन। निस्सन्देह, त्यहाँ सधैं एक तरिका बाहिर छ। र यो मामला मा हामी जो आफ्नो पेट आकर्षक राहत हुनेछ, किनभने प्रेस लागि अभ्यास को एक सेट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं त यो लेख पढ्दै हुनुहुन्छ भने धेरै म पहिले नै खोजे। त्यसैले, तपाईं को सूचीमा जाने अघि प्रेस लागि प्रभावकारी व्यायाम, गरेको उनको कार्यान्वयन को आधारभूत सिद्धान्तहरू परिभाषित गरौं।
पहिलो सिद्धान्त - प्रभावकारी पेट मांसपेशीमा बाहिर काम गर्न अभ्यास को एक किसिम संयुक्त गर्नुपर्छ। यो मांसपेशी मिलाइएको संग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
दोस्रो सिद्धान्त - पुनरावृत्तिकोसङ्ख्या को भुँडी नम्बर मा मांसपेशिहरु वृद्धि लागि अधिक पन्ध्र हुँदैन। आवश्यक छ भने, प्रेस लागि अभ्यास को सेट भार लागू गरेर जटिल गर्न सकिन्छ।
र अन्तमा, तेस्रो सिद्धान्त - प्राप्त बोसो Folds को छुटकारा तपाईं उपयुक्त आहार मदत गर्नेछ। यो बिना पनि विशेष चयन अभ्यास बिल्कुल बेकारी हुनेछ।
प्रशिक्षण योजनाहरु बारे अब केही शब्द। प्रेस लागि व्यायाम कार्यक्रम एक हप्ता एक दैनिक आधार मा प्रदर्शन गर्न सकिँदैन, र एक पटक वा दुई पटक। यहाँ तपाईँले आफ्नै निर्णय छ।
सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्प बारेमा केहि शब्द पेट मांसपेशी अभ्यास लागि। यो समूह समावेश एक Vise मा खुट्टा लिफ्टहरु, मात्र, liftings मामला अवस्थित जो र, पाठ्यक्रम कर्लिंग एक किसिम। यसका अतिरिक्त, तपाईं आफ्नो खुट्टा, "साइकल" वा "कैंची" बर्खास्त गर्न सक्दैन। यी अभ्यास को सबै तीन को भुँडी मा अनावश्यक बोसो को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तीस मिनेट र तिनीहरूले हरेक दिन चाहिन्छ - तर, एक यी अभ्यास को अवधि बीस-पाँच को एक औसत छ जहाँ आफ्नो दक्षता को मामला मा मात्र वृद्धि भएको छ भन्ने तथ्यलाई विचार गर्नुपर्छ। तपाईं राम्रो परिणाम हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो रोगी छ।
म धेरै एकदम स्पष्ट कारण जिम भ्रमण गर्न संकोच भन्ने मान्छु। यस मामला मा, घर मा प्रेस लागि अभ्यास को एक सेट - यो आवश्यक के छ। यहाँ तिनीहरूलाई केही छन्।
भुइँमा ढाँट्छन्। तिनीहरूले समर्थन को एक बिन्दु वरिपरि र्याप भनेर हात टाउको पछाडि राखिनेछ। को घुँडा मा झुकेको खुट्टा, कूल्हों तल्ला लम्ब स्थितिमा छन्। श्वास र, श्रोणि उठाने आफ्नो छाती आफ्नो घुँडा पुल। अब श्वास छोड्नुहोस् र बिस्तारै मूल स्थिति फर्कनुहोस्।
अर्को व्यायाम - घुमाई। प्रारम्भिक स्थिति, अघिल्लो संस्करणमा जस्तै हातमा बाहेक। तिनीहरूले आफ्नो टाउको, कोहनी पछि र पक्ष निर्देशित एकै समयमा हुनुपर्छ। , अगाडी छाती दिने र विपरीत दिशा मा आफ्नो नितम्ब बढन तल्ला बन्द काँध उचाल्न।
यस्तै अभ्यास प्रशस्त छन्। यी विकल्प सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ छन्। त्यसैले यो आधारमा प्रेस लागि अभ्यास को एक सेट निर्माण गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
अन्तमा, अर्को महत्वपूर्ण कुरा - मात्र एक छोटो न्यानो-अप पछि कक्षाहरू गर्न अगाडि बढ्नुहोस्। र यो छ भने राम्रो छ अभ्यास stretching।
धेरै, घर मा, आफ्नो मुद्रा विकास गर्न सक्छौं - पछाडि लागि व्यायाम!
कसरी जिम गर्न भ्रमण बिना2हप्ता को लागि एक प्रेस निर्माण गर्न?
Creatine Monohydrate (creatine) साइड इफेक्ट, आवेदन, समीक्षा
घरमा डम्बबेलनेबुला संग व्यायाम
के व्यापार कार्ड हुनुपर्छ
आफ्नो हातले हलवे - अहिले भर्खरै हो
कृत्रिम पत्थर, राम्रो सजिलै गर्न कि हात के छ
सामन कावीयार - एक उपयोगी विनम्रता
कोठा नींबू: घरको हेरचाह, बढ्दै, फोटो, रोग, खिल, प्रजनन
तपाईं chipboard को आकार जान्नु आवश्यक के
Hurghada होटल4* - किफायती छुट्टी, विविध सेवा
Nino Manfredi - इटालियन अभिनेता। आफ्नो फिल्म